Faah faahin dagaal culus oo xalay ka dhacay gudaha Magaalada Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Faah faahin dagaal culus oo xalay ka dhacay gudaha Magaalada Muqdisho
Faah faahin dheeraad ah ayaa waxa ay kasoo baxeysaa dagaal xoogan oo xalay ka dhacay gudaha Magaalada Muqdisho.
Dagaalkan ayaa yimid kadib markii kooxo hubeysan oo aan la garan waxa ay yihiin ay weerar ku soo qaadeen fariisin Ciidamada dowlada ay ku leeyihiin Shaneemo cabdi waayeel oo ku taalla Degmada Huriwaa ee Gobolka Banaadir.
Dadka deegaanka Degmada Huriwaa ayaa inoo sheegay in xalay dagaal xoogan uu ka dhacay Xaafadda Shaneemo Cabdi waayeel,isla markaana gudaha Magaalada laga maqlayay dhawaqa rasaas culus oo labada dhinac ah,taasi oo dadka Muqdisho xalay ku beertay qalqal cabsi ah.
Sidoo kale waxaa la sheegay in dagaalka uu socday muddo daqiiqado ah,waxaana ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac ah.
Ilaa iyo hada lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya,mana jiro wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga dowlada Soomaaliya ee aadan dagaalka.